Topi-maso Arabo : Inona no fivavahanao ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2007 13:40 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, हिन्दी, Français, عربي, 日本語, English
Any amin'ny firenena Arabo sansantsasany, ny fidirana birao dia arahina fombafomba manokana izay mampiavaka azy. Ny mpiblaogy Nora Younis dia mampiharihary amintsika izay zava-mitranga rehefa mivadika ho « mpanadihady ara-pinoana » ireo mpiasa birao, nadika avy amin'ny teny arabo ity lahantsoratra ity.
Azia Afovoany sy Kaokazy 9 ora izay
Azia Atsimo 17 ora izay
Hay ve ka “lawyer” nop nadika hoe vadintany … tsy haiko indray aloha iny teny iray iny. Ny fahalalako azy dia hoe mpisolovava sa ahoana ?
03 Oktobra 2007, 16:18
wow ! misaotra Tomavana an. Haingana kely ery ny kapokao izany.
03 Oktobra 2007, 16:50
@ Mialy mason-tsokina e, ka izay kely ananana ihany no ahiratra. Tsy misy fisaorana fa iaraha manana io e
@ Crjo ny anao no marina, misaotra amin’ny fiaraha-miasa, atao ahoana fa na ny mihinam-bary aza misy latsaka 😉
03 Oktobra 2007, 18:40